Ngakho-ke kuyinto engu lapho ingane akasayidingi ubisi eyodwa webele. Ake ke iqukethe semali amavithamini nezakhi ezondla umzimba, kodwa manje ingane idinga umthombo obengeziwe irisidi yabo. Ukondla ingane ngesikhathi 6 izinyanga isiba wehlukile - ukwethula ukudla okuqinile.
Kunconywa ukuba uqale nge yemifino puree. Ngoba wona kanye ukudla kuqala zucchini ephelele, iklabishi (broccoli, cauliflower) noma isanqante. Akunakusetshenziswa akazange aqale nge amazambane, iqukethe isitashi, ukusabela iguliswa singenzeka lapho ingane. Ukudla Eyokuqala yengane at 6 izinyanga kuhlanganisa puree ingxenye eyodwa kuphela.
Uma uhlela ukuba self-ukupheka ke kukhethwa imikhiqizo kufanele aphathwe ngokuqapha okukhulu. Ideal - imifino kusuka engadini yabo. Ungaba ngokuphelele ukuthi zingabantu zemvelo ngokuphelele, likhule ngaphandle kosizo kwamakhemikhali ahlukahlukene. Ezinye izinhlobo walondoloza efrijini ebusika kahle. Ngokwesibonelo, izinhlobo ezihlukahlukene iklabishi (cauliflower, broccoli). Ngokuthenga imikhiqizo ukulungiswa ingane ukudla, akudingekile ukuba banake isithelo eyigeza. ubuhle yi okunjalo olunzulu ukwelashwa kwamakhemikhali. Lokhu kusebenza kuzo zombili imifino nezithelo. Ukondla ingane ngesikhathi 6 izinyanga kufanele kuphela akhathazeke izithako zemvelo ngokuphelele, futhi lawa izithelo malopriglyadnye, ngokuvamile bamshaya indiva.
Ukuze zonke izakhiwo ezuzisayo kuyagcinwa, kungcono ukulungiselela ingane ukudla ambalwa. Lena akuyona kuphela okubalulekile, kodwa futhi kumnandi ukulifunda nokulilalela ukunambitheka, okhamiwe wahlanganiswa selithamba ngaphezulu. Usawoti, ushukela, izinongo, akekho kulaba yengezwe amazambane okhamiwe wahlanganiswa zezingane. imifino kuphekwe wagcoba ngokusebenzisa isikrini noma blender nepepper.
Ukuze uqale ukwethulwa ekudleni yemifino puree baby ukudla izinyanga 6 kufanele kube kancane kancane ukuze ukwazi ukubona ukusabela iguliswa noma ushintsho sezinyawo wengane. Okokuqala kunikezwa kuphela isipuni, ivolumu bese ecubuziwe kancane kancane kwandisa 150 amagremu. Koneno uma ingane emizimbeni wanika Akwenzekanga lutho futhi.
Njalo ngeviki ungakwazi ukwethula imifino entsha. Khona-ke ukudla kuba ihlukahluke, mix ajwayelekile ingane imifino. Lokhu okuthiwa multi-Mash.
Okulandelayo kumugqa izithelo puree. Umqondo wukuthi usungaqala ukuyengela izithelo esikhundleni imifino. Kodwa kukhona esinye isizathu esenza ukuba akufanele bakwenze. Izithelo - umkhiqizo amnandi, ingane Ufika esetshenziswa futhi abakwazi ngempela ukuyeka imifino esihlwabusayo.
Izithelo - inqolobane yangempela izakhi kanye amavithamini. Bayisibonelo umthombo insimbi, potassium, magnesium, ama-carbohydrate, fibre, ngamavithamini A no-C Lokhu kusiza umzimba ukuthuthukisa ngokugcwele ezincane. It nakanjani kufanele ibe ukudla yengane at 6 izinyanga.
Ngaphambi isingeniso izithelo ekudleni Ungazama futhi ukunikeza ingane kancane apple juice. Uma kungekho mpendulo, bese uqale ngokuphepha ukuyengela ingane applesauce. Khona-ke kancane kancane ukwazi ecubuziwe amagonandoda, amapetshisi amabhilikosi, ubhanana.
Uma ungeyena iguliswa zonke izithelo nemifino yethulwe, kungenzeka ukulungiselela puree elihlangene. Carrot apula, zucchini ne apula ingane bayakujabulela ecubuziwe nge kwalokho ubisi womuntu noma Izingxube yalo.
Elilinganiswayo ingane 6 izinyanga imenyu siqukethe mayelana 60ml. ijusi, izithelo puree amagremu 100 kanye 150 amagremu of yemifino puree. Futhi-ke, ubisi lwebele, noma inhlanganisela. Kodwa-ke kudingeka ukuba uqonde ukuthi lezi izibalo eseduze kuphela. Ingane ngayinye uyodla njengoba nje kunjalo ngawo umzimba wakhe ezidingekayo. Ngakho Akubalulekile ukuphoqelela ukuphoqelela ingane has lonke ingxenye. Uma ikhafule ukudla, liphendulile ikhanda, kusho ukuthi nje badla. Kungase kube yisimo esiphambene nalokho, uma ingane idinga dobaki, ukukhala, avule umlomo wakhe, kwakuzodingeka ukwelekelela.
Ukukhwehlela in ingane ngaphandle imfiva. Kuka ukwelapha lesi sifo?
Indlela ukukhetha amagama ezingavamile for amantombazane nabafana?
Freekids - stroller Convertible ukuklanywa
Pyrolysis eside evutha kubhayela. Homemade Pyrolysis eside evutha boilers
Regulon: side effects kanye umphumela zokwelapha
Indlela lokunciphisa izinhlungu esiswini phansi kubantu besifazane
Okufakiwe amahhotela ezishibhile e Smolensk
Ukupheka pasta ne utamatisi unama kanye seasonings